राउण्ड टेबल नेपालद्वारा छात्रछात्राका लागि रू. २० लाख सहयोग | आर्थिक अभियान
राउण्ड टेबल नेपालद्वारा छात्रछात्राका लागि रू. २० लाख सहयोग
काठमाडौं (अस) । राउण्ड टेबल नेपालले शिक्षाक्षेत्रका लागि २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । १८९ जना छात्रछात्राको शैक्षिक उन्नयनका लागि लागि उक्त सहयोग गरिएको संस्थाले बताएको छ । गैरनाफामूलक उक्त संस्थाले देशका विभिन्न जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म ३७३ कक्षाकोठासहित ४० ओटा शौचालय र ५८ ओटा विद्यालय तथा अनाथालय निर्माण गरिएको संस्थाले बताएको छ ।
राउण्ड टेबल इन्टरनेशनलसँग आबद्ध भई सन् १९९९ मा स्थापना भएको राउण्ड टेबल नेपालले मुलुकभर रहेका ३२ च्याप्टरमा आफ्ना ५१३ सदस्य रहेको जानकारी दिएको छ । १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा मात्र सदस्यको रूपमा रहने सो संस्थाले राष्ट्रिय परियोजना ‘फ्रिडम थ्रू एजुकेसन’ समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । संस्थाले देशको कुनै पनि स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (समग्र विद्यालय भवन)देखि आवश्यकता अनुसार शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर, लाइब्रेरी र ल्याब निर्माण गर्दै आएको छ ।